Uyenza njani into engacacanga kwividiyo eneAdobe Premiere | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ungayibetha njani ividiyo kunye neAdobe Premiere
UPablo Gondar | | Ihlaziywe 17/04/2018 17:08 | Idizayini yeMifanekiso, Amaqhinga, Tutorials
Njani yenza ukufiphala kwividiyo nge I-Adobe Premiere ngendlela yokuba sifumaneulawulo lokufiphala kanye njengokuba sisenza ngekhamera yedijithali yobungcali. Asinguye wonke umntu onokufikelela kwikhamera ye-reflex yekhamera ke yenza iincopho zebala kunokuba yinto enzima kakhulu ukuyenza.
Masithi silungiselele ividiyo yethu kwaye siyaqonda ukuba silibele ukongeza uthotho lwezinto ezithile kwiindawo ezithile zevidiyo, kunganzima kakhulu ukurekhoda yonke ividiyo kwakhona, ngenxa yeso sizathu kubaluleke kakhulu ukuyazi lawula ezi zixhobo I-Adobe Premiere ukuze ukwazi ukulawula ukungaboni. Isixhobo ekulula ukusisebenzisa esinika uninzi izibonelelo xa uhlela ividiyo.
Ukufiphaza yenza umbala wethu ube mnyama ngohlobo lokuba ukubonakala kulahleke, ngaloo ndlela kufikelelwe fihla umxholo kwividiyo, oku kungafumana nika ukubaluleka ngakumbi kwezinye izinto zomfanekiso njengombhalo okwazi ukwenza isihloko sekhredithi apho imvelaphi ingaphandle kokugxila kwaye iileta zijolise ngokupheleleyo. Sinokusebenzisa ukufiphala ukuya fihla umfanekiso womntu, Esi sisibonelelo esisetyenziswa kakhulu kumdlalo bhanyabhanya. Nantoni na esiyenzayo kufuneka siyibone mfiliba ngaphaya kwempembelelo elula.
Siza kufunda Iindidi ezimbini zokufiphala nge INkulumbuso
Ukukhanya kwebala itshekishiwe
1 Ukufiphala ngokubanzi
2 Sika ividiyo
3 Ukulawulwa kwebala okulawulwayo
Ubumdaka bokuqala esiza kufunda ukukwenza INkulumbuso iqulathe ukufiphala ngokubanzi apho sisebenza khona kwisiphumo sayo yonke ingoma yevidiyo, Sisebenzisa isiphumo esifanayo ngokulinganayo kwividiyo yonke. Olu hlobo lweziphumo luya kuza xa injongo yethu kukufiphaza isiqwenga sevidiyo ngokulinganayo ngaphandle kwesidingo sokwenza iblur elawulwayo.
Ukuba sifuna ukufaka ukufiphala kwinxalenye yevidiyo ngokubanzi ngaphandle kwesidingo sokubenza nzima ubomi bethu, into ekufuneka siyenzile kuqala yile sika ividiyo apho sifuna ukufaka khona ukukhanya. Ukwenza oku kunqunyulwa siza kusebenzisa isixhobo blade de Inkulumbuso.
Ukusebenzisa isixhobo seblade kufuneka nje ukhethe kwaye ucofe ividiyo, siya kusika ngokuzenzekelayo ividiyo yethu.
Nje ukuba ividiyo yethu ilungile, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukujonga ifayile ye- isixhobo esibonakalayo kwimenyu yeziphumo zevidiyo. Ukufaka isicelo sokufiphaza, konke ekufuneka sikwenzile kukutsala ukufiphala kweGaussia kwisiqwengana sevidiyo yethu. Emva kokurhuqa isiphumo, into elandelayo esiza kuyenza kukucofa kabini kwisiqwengana sevidiyo kwaye ucofe u imenyu yokulawula iziphumo ebekwe phezulu kwesikrini ngasekhohlo.
Ukufaka isicelo sokufiphala kufuneka sikwenze susa isikhombisi yokhetho olufipheleyo.
Ukulawulwa kwebala okulawulwayo
Ukuba sifuna ukwenza ifayile ye- Ukufiphaza ngokuchanekileyo kwaye ilawulwa singayenza ngokhetho olufanayo lweGaussian kodwa ukumakisha amanqaku aphambili imimandla apho sifuna ukufaka khona ukukhanya. Singafezekisa isiphumo sokuthamba xa sisebenzisa obu buchule ngendlela elawulwayo.
Ngeli xesha into esiya kuyenza kukusebenzisa ibha yokukhetha ixesha ukumakisha apho sifuna ukusebenzisa khona ukufiphala kwethu.
Sikhetha icandelo levidiyo apho sifuna ukufaka isiphumo
Sicofa ixesha ukumakisha igama eliphambili
Sikhetha iiparameter yobumnyama
Sikhetha icandelo levidiyo Apho sifuna ukufaka khona isiphumo sokukhanya, emva koku sicofa ikloko ukuya yenza igama eliphambili, Ngokwenza oku sixelela inkqubo ukuba isiphumo siqala ngelo xesha kwividiyo.
Ukuba sicofa ukhetho yongeza isakhelo into esiyiphumezayo kukwenza enye inqaku kwividiyo ukuze siyifumane sebenzisa isiphumo kuloo ndawo kanye kwividiyo. Kuqhelekile ixesha lesikhombisi sokuhambisa kwaye uhambe usebenzise isiphumo ngendlela elawulwayo ngokuxhomekeke kwiimfuno zomntu ngamnye.
Ukulawulwa kwamagama aphambili into esisiseko kwaye iluncedo ekuhleleni ividiyo, kwesi sizathu kunomdla kakhulu ukuqala ukusebenza nolu hlobo lwesixhobo kancinci kancinci ukufumana inqanaba eliphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungayibetha njani ividiyo kunye neAdobe Premiere
I-Wacom Pro Pen 3D sisixhobo esitsha kuyilo, ukukrola kunye nokwenza
Lo mfoti ufota irekhodi lokuhamba kweminyaka kuthotho lwabemi eNew York